I-Ultrasonics: Izicelo nezinqubo - Hielscher Ultrasound Technology
I-Ultrasonication ubuchwepheshe obusebenzisekayo bezicelo eziningi, njenge-homogenizing, ukuhlakazeka, ukuhlakazeka, i-sonochemistry, i-degassing noma ukuhlanza. Ngezansi, uzothola izinhlelo zokusebenza ezijwayelekile nezinqubo.
Uyacelwa ukuthi uchofoze ezintweni zohlu olulandelayo ukuze uthole imininingwane engaphezulu kwesicelo ngasinye.
Ukukhishwa Okumanzi Nokugaya
Ukushisa Amanzi Okushisayo
Ukutholakala Kokuvuza (Amabhodlela Namathini)
Ukuhlanza (i-Wire / Strip)
Ama-homogenizers e-Ultrasonic anciphisa izinhlayiya ezincane kuketshezi ukuthuthukisa ukufana nokusimama kokuhlakazeka. Izinhlayiya (isigaba sokuhlakazeka) kungaba okuqinile noma amaconsi oketshezi amiswe esigabeni soketshezi. I-Ultrasonic homogenizing isebenza kahle kakhulu ekwehliseni izinhlayiya ezithambile nezinzima. I-Hielscher ikhiqiza amadivayisi we-ultrasonic we-homogenization yanoma iyiphi ivolumu ye-liquid kanye ne-batch noma i-inline processing. Amadivayisi we-Laboratory ultrasonic angasetshenziselwa amavolumu kusuka ku-1.5mL kuya ku-approx. 4L. Amadivayisi wezimboni ze-Ultrasonic angacubungula ama-batches kusuka ku-0.5 kuye ku-approx. 2000L noma ukugeleza kwamanani kusuka ku-0.1L kuye kuma-cubic metres ayi-20 ngehora ekuthuthukisweni kwenqubo noma ekukhiqizeni
Chofoza lapha ukuze ufunde kabanzi mayelana ne-ultrasonic homogenizing!
Ukuhlakazeka nokususwa kwamakhemikhali okuqinile kuketshezi ukusetshenziswa okubalulekile kwamadivayisi we-ultrasonic. I-Ultrasonic cavitation ikhiqiza amandla aphezulu e-shear ahlukanisa izinhlayiya zezinhlayiyana zibe yizinhlayiyana ezihlakazekile ezingashadile. Ukuxutshwa kwempuphu neziphuzo kuyisinyathelo esivamile ekwakhiweni kwemikhiqizo ehlukahlukene, enjengopende, imoto, iziphuzo, noma imithombo yezindaba epholisha. Izinhlayiya ngazinye zibanjwa ndawonye ngamandla okuheha ezinhlobonhlobo zomzimba nezamakhemikhali, kufaka phakathi amabutho e-van-der-Waals-and the surface surface tension. I-Ultrasonication iyanqoba la mandla okuheha ukuze kukhiqizwe futhi kusatshalaliswe izinhlayiya zibe yimidiya ewuketshezi. Okwehlakazeka nokususwa kwempuphu kuziphuzo, umfutho ophakeme we-ultrasonication kungenye indlela ethokozisayo kuma-homogenizers anomfutho ophakeme, ama-mixers aphezulu we-shear noma ama-rotor-stator-mixers.
Chofoza lapha ukuze ufunde kabanzi mayelana nokusabalalisa kwe-ultrasonic nokususa i-deagglomeration!
Uhla olubanzi lwemikhiqizo emaphakathi neyabathengi, njengezimonyo kanye nokugcoba isikhumba, okokugcoba okwenziwa ngemithi, ivanishi, upende kanye nezinto zokuthambisa kanye namafutha kususelwa ngokuphelele noma engxenyeni ye-emulsions. Ama-emulsions ahlakazeka oketshezi ezimbili noma ngaphezulu ezingabonakali. I-ultrasound enamandla kakhulu inikeza ishear esanele ngokwanele ukusabalalisa isigaba soketshezi (isigaba esihlakazekile) ngamaconsi amancane esigabeni sesibili (isigaba esiqhubekayo). Endaweni ehlakazekayo, ukufaka amabhamuza we-cavitation kubangela amagagasi amakhulu wokushaqeka kuketshezi oluzungezile futhi kuholele ekwakhiweni kwamajetshi wamanzi we-velocity ephakeme (shear ephezulu). I-Ultrasonication ingafinyelela osayizi bethonsi abasho kahle ngaphansi kwe-1 micron (i-micro-emulsion).
Chofoza lapha ukuze ufunde kabanzi mayelana ne-ultrasonic emulsifying!
I-ultrasonic Wet-Milling nokuGaya
I-Ultrasonication iyindlela ephumelelayo yokugaya okumanzi nokugaya okuncane kwezinhlayiya. Ikakhulukazi ekukhiqizeni ama-slurries angosayizi abahle kakhulu, i-ultrasound inezinzuzo eziningi. Iphakeme kunemishini yokwehlisa usayizi wendabuko, njengalezi: izigayo ze-colloid (isib. Izigayo zebhola, izigayo zobuhlalu), izigayo zamadiski noma izigayo zejethi I-Ultrasonication ingacubungula ama-slurries we-high-concentration ne-high-viscosity - ngakho-ke ukunciphisa ivolumu ezocutshungulwa. I-Ultrasonic milling ilungele ukucubungula izinto zosayizi we-micron nosayizi we-nano-size, njenge-ceramics, pigments, barium sulphate, calcium carbonate noma i-oxide yensimbi.
Chofoza lapha ukuze ufunde kabanzi mayelana nokukhishwa kwe-ultrasonic okumanzi nokugaya okuncane!
Ukwelashwa kwe-Ultrasonic kungahlakazeka okunezintambo, okwe-cellulosic kube yizinhlayiya ezinhle futhi kuphule izindonga zesakhiwo seseli. Lokhu kukhipha okuningi kwangaphakathi kwamaselula, okufana nesitashi noma ushukela kulolo ketshezi. Lo mphumela ungasetshenziselwa ukuvutshelwa, ukugaya kanye nezinye izinqubo zokuguqulwa kwezinto eziphilayo. Ngemuva kokugaya nokugaya, i-ultrasonication yenza okuningi kokuqukethwe kwangaphakathi kwamaselula isb isitashi kanye nemfucumfucu yodonga lweseli etholakala kuma-enzyme aguqula isitashi sibe ushukela. Iphinde inyuse indawo engaphezulu evezwe kuma-enzyme ngesikhathi sokuchithwa noma kwe-saccharification. Lokhu empeleni kwandisa isivinini kanye nokukhishwa kwemvubelo yokuvutshelwa nezinye izinqubo zokuguqula, isb ukukhulisa ukukhiqizwa kwe-ethanol kusuka ku-biomass.
Chofoza lapha ukuze ufunde kabanzi mayelana nokuhlakazeka kwe-ultrasonic kwezakhi zamaseli!
Ukukhishwa kwama-enzyme namaprotheni agcinwe kumaseli nezinhlayiya ezingaphansi kwamakhemikhali uhlelo olusetshenziswa kabanzi lwe-high-intensity ultrasound. Ukukhishwa kwe-solvent kwamakhemikhali e-organic aqukethe ngaphakathi kwezitshalo noma imbewu kungathuthukiswa kakhulu. I-Ultrasound inenzuzo engaba khona ekukhishweni nasekuhlukanisweni kwezakhi zenoveli ezingaba yi-bioactive, isb. Kusuka ekusakazweni okungasetshenziswanga komkhiqizo okwenziwe kuzinqubo zamanje. I-Ultrasonication ubuchwepheshe obusebenzayo bokukhishwa kwe-botanical ku-lab nasezingeni lokukhiqiza.
Chofoza lapha ukuze uthole olunye ulwazi mayelana ne-ultrasonic cell extraction!
Inamandla ye-Ultrasonic Cavitation ku-Liquid
Ama-watts ayi-1,000 we-ultrasonic asethelwe ukuthuthukiswa kwenqubo nokwenza kahle
Isicelo Sonochemical of Ultrasonics
I-Sonochemistry ukusetshenziswa kwe-ultrasound ekuphendukeni kwamakhemikhali nezinqubo. Indlela ebangela imiphumela ye-sonochemical kuketshezi yinto ye-acoustic cavitation. Imiphumela ye-sonochemical ekuphendukeni kwamakhemikhali nezinqubo ifaka phakathi ukwanda kwejubane lokuphendula noma ukukhipha, ukusetshenziswa kwamandla okuthe xaxa, ukwenziwa kokusebenza kwama-catalysts wesigaba sokudluliswa, ukusebenza kwezinsimbi nokuqina noma ukukhuphuka ekusebenzeni kabusha kwama-reagents noma ama-catalysts.
Chofoza lapha ukuze ufunde kabanzi mayelana nemiphumela ye-sonochemical ye-ultrasound!
I-ultrasonication yandisa isivinini se-chemical response and yield of the transesterification yamafutha yemifino nezilwane zezilwane zibe yi-biodiesel. Lokhu kuvumela ukuguqula ukukhiqizwa kusuka ekuqhubeni amathambo kuya ekuqhubeni kokuqhuma okuqhubekayo futhi kunciphisa izindleko zokutshalwa kwezimali nokusebenza. Ukukhiqizwa kwe-biodiesel kusuka emafutheni omifino noma amafutha ezilwane, kuhilela ukuguqulwa kwama-acids e-base-catalyzed base-base nge methanol noma i-ethanol ukunikeza ama-methyl esters afanayo noma ama-ethyl esters. I-ultrasonication ingakwazi ukufeza isivuno se-biodiesel ngokwezingu-99%. I-Ultrasound inciphisa isikhathi sokucubungula kanye nesikhathi sokuhlukanisa kakhulu.
Chofoza lapha ukuze ufunde kabanzi mayelana nokuguqulwa kwe-ultrasonically kwamafutha ku-biodiesel!
Ukuqeda uketshezi kweziphuzo kuyisicelo esithakazelisayo samadivayisi we-ultrasonic. Kulesi simo i-ultrasound isusa ama-bubbles amancane omisiwe avela ketshezi futhi inciphisa izinga legesi eliqhekekile ngaphansi kwezinga lemvelo lokulinganisa.
Chofoza lapha ukuze ufunde kabanzi mayelana ne-ultrasonic degassing yeziphuzo!
Ungafaka amadivayisi we-ultrasonic kumabhodlela nemishini yokugcwalisa ukuhlola amathini namabhodlela okuvuza. Ukukhishwa ngokushesha kwe-carbon dioxide kungumphumela wokuthatha isinqumo sokuhlolwa kokuvuza kwe-ultrasonic kweziqukathi ezigcwele iziphuzo ezine-carbonated.
Chofoza lapha ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe mayelana nokubona ukuvuza kwe-ultrasonic!
Ukuchithwa okungaqhubekayo kwezinhlelo zamanzi ashisayo
Ukulwa namagciwane ayingozi eLegionella ezinhlelweni zamanzi ashisayo nokuvikela indawo yokugeza ephephile inkampani yaseGruenbeck isungule uhlelo lweGENO-break. Lolu hlelo lusebenzisa ubuchwepheshe be-Hielscher ultrasonic ngokuhlanganiswa nokukhanya kwe-UV-C.
Chofoza lapha ukuze uthole ulwazi oluthe xaxa mayelana ne-ultrasonically ukusiza ukungena ekushoneni.
I-ultrasonic Wire, iCheth and Strip Cleaning
Ukuhlanzwa kwe-Ultrasonic kuyindlela enobungani bemvelo yokuhlanzwa kwezinto eziqhubekayo, ezinjengezintambo nentambo, itheyiphu noma amashubhu. Umphumela we-cavitation enamandla ye-ultrasonic isusa izinsalela zokuthambisa ezinjengamafutha noma igrisi, insipho, ama-stearate noma uthuli endaweni ebonakalayo.
Chofoza lapha ukuze uthole olunye ulwazi mayelana nokuhlanzwa kwe-ultrasonic!
Cela ulwazi oluthe xaxa mayelana nokusetshenziswa kwe-ultrasonic!
Uma inqubo yakho ehlosiwe ingabhalwanga ngenhla, sicela usazise. Sinezinombolo eziningi ze-ultrasonic nezixazululo ezingahlangabezana nezidingo zakho.
Imininingwane Ejwayelekile mayelana nokucubungula kwe-Ultrasonic
I-Ultrasonication ubuchwepheshe bokucubungula bokuhweba ngokugcwele. Ukuthembeka okuphezulu kanye ne-scaleablility kanye nezindleko zokugcina eziphansi nokusebenza kahle kwamandla kwenza amadivayisi we-ultrasonic abe enye indlela enhle yemishini yendabuko yokucubungula uketshezi. I-Ultrasound inikeza amanye amathuba athokozisayo: I-Cavitation - umphumela oyisisekelo we-ultrasonic - ikhiqiza imiphumela ehlukile kuzinqubo zebhayoloji, zamakhemikhali nezomzimba.
Ngenkathi i-low-intensity noma i-high-frequency ultrasound isetshenziswa kakhulu ekuhlaziyweni, ekuhloleni nasekucabangeni okungonakalisi, i-high-intensity ultrasound isetshenziselwa ukucubungula uketshezi olufana nokuxuba, ukumisa emulsifying, ukuhlakazeka kanye nokuqeda amandla, ukuqhekeka kwamaseli noma ukwenziwa kwe-enzyme. Lapho i-sonicating uketshezi ngamandla amakhulu, amagagasi omsindo asakazeka ngemithombo yezindaba ewuketshezi. Lokhu kubangela ukushintshanisa imijikelezo yengcindezi ephezulu (ukucindezela) kanye nengcindezi ephansi (ye-rarefaction), ngamazinga ngokuya ngemvamisa. Ngesikhathi somjikelezo onengcindezi ephansi, amagagasi e-ultrasonic aphezulu enza ama-bubble amancane noma i-voids kulolo ketshezi. Lapho amabhamuza athola ivolumu lapho engasakwazi khona ukumunca amandla, awa ngamandla lapho kunomjikelezo onengcindezi ephezulu. Lesi simo sibizwa ngokuthi yi-cavitation. Ngesikhathi sokufakwa okuphezulu kakhulu (cishe i-5,000K) nezingcindezi (cishe i-2,000atm) zifinyelelwa endaweni. Ukufakwa kwe-bubble ye-cavitation nakho kuphumela kuma-jets ketshezi afinyelela kumamitha angama-280 ngejubane lesibili.
I-Ultrasonic cavitation oketshezi ingadala ukusheshisa nokuqedela ngokuphelele; qala ukusabela okuhlukahlukene kwamakhemikhali ngokukhiqiza ama-ion wamahhala (ama-radicals); ukusheshisa ukusabela kwamakhemikhali ngokwenza lula ukuxubana kwama-reactants; thuthukisa ukusetshenzwa kwepolymerization kanye nokwehliswa kwamandla ngokweqile ngokusabalalisa ukuhlanganiswa noma ngokugqashula unomphela izibopho zamakhemikhali ngamaketanga e-polymeric; ukwandisa amazinga we-emulsification; thuthukisa amazinga wokusabalalisa; khiqiza ama-emulsions agxile kakhulu noma ukusabalalisa okufanayo ngomshini osayizi we-micron noma we-nano-size; siza ukukhishwa kwezinto ezifana nama-enzyme ezilwaneni, ezitshalweni, kwimvubelo noma kumaseli wegciwane; susa amagciwane ezicutshini ezinegciwane; futhi ekugcineni, kugugule futhi kudilize izinhlayiya ezithintekayo, kufaka phakathi izinto ezincane eziphilayo. (Kuldiloke 2002)
I-high-intensity ultrasound ikhiqiza ukudlikizela okunodlame kuziphuzo ezinama-viscosity aphansi, ezingasetshenziselwa ukusabalalisa izinto ezisetshenziswayo. (Ensminger, ngo-1988) E-liquid / solid or gas / interfaces eqinile, ukungena kwe-asymmetric ye-bubble cavitation kungabangela izingxubevange ezidakayo ezinciphisa ukwehlukaniswa kwemingcele yokwehlukaniswa, ukwandisa ukudluliselwa kwamandla okudlulisa, futhi kukhulise kakhulu ukusabalalisa ezindaweni lapho ukuxuba okuvamile kungenzeki khona. (Nyborg, ngo-1965)
I-Ensminger, DE (1988): Izindlela ze-Acoustic ne-electroacoustic zokwehlisa nokomisa, ku: Ukomisa iTekhnoloji. 6, 473 (1988).
Kuldiloke, J. (2002): Umphumela we-Ultrasound, Temperature nokucindezela ukwelashwa kwi-Enzyme Umsebenzi wezakhi zekhwalithi zezithelo nezithelo zemifino; Ph.D. I-Thesis e-Technische Universität Berlin (2002).
INyborg, WL (1965): Ukusakaza kwe-Acoustic, Umq. 2B, Academic Press, eNew York (1965).